mpampianatra mpikaroka, raha nanazava ny antony hitoloman’izy ireo ihany koa mba hiverenan’ireto nosy ireto amintsika omaly. Ny mahavalalanina anay fotsiny, hoy ny filohan’ny Seces Tana, ny Pr Sammy Grégoire Ravelonirina, dia ny tsy hitakiana an’i Tromelin. Raha ny fanehoan-kevitra ara-jeografika sy tantara ary ny fikarohana rehetra anefa dia tokony ho izy 5 no antsika. Tsy maintsy takiantsika ireo ary ho azontsika. Zava-dehibe aminay, hoy izy, ny fijerena ny tokony hatao hamerenana ireo. Manana ny heviny ny Seces izay havoaka amin’ny fotoana mahamety azy fa ampahany aloha no navoaka teny amin’ny CCI Ivato. Misy ny antoka ahafahana manambara fa tokony ho afaka 3 taona dia ho azontsika ireo nosin-drazantsika ireo saingy tsy havoakanay aloha ny hevitra satria mbola misy ny mpamorika sy mpamosavy ary tia kely mety hanimba ny tolona mialoha ny fotoana, hoy hatrany ny filohan’ny Seces, sampana Antananarivo.